Dhibaatooyinka jirka ee lebiska Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Caafimaadka Saameynta jirka ee Porn
Dad badan oo dhalinyaro ah waxay u arkaan porn-ka inuu yahay buug-gacmeed, ilaha fikradaha ku saabsan adduunka galmada dadka waaweyn. Waxaa wax laga xumaado ah in goobaha lulataaye aysan la imaan digniin ku saabsan halista ama waxyeelada. Waxay naftooda u kobciyaan sidii raashin iyo madadaalo aan dhammaad lahayn. Sida dhammaan walxaha iyo dabeecadaha balwadda leh, lebbisku wuxuu u keeni karaa maskaxda isbeddello daran waqti ka dib wuxuuna dhiirrigeliyaa dabeecadaha waxyeelleeya qaybaha kale ee jirka. Ceejinta aan dhimashada lahayn ama 'ciyaarta hawada' sida warshadaha lulataaye ugu yeeraan euphemistically, waa mid ka mid ah tusaalooyinka noocan oo kale ah oo maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaya Fiiri tan blog waxa on.
Isbedelka jireed ee ugu argagaxa badan ee ay sheegaan ragga, gaar ahaan ragga kayar 40 sano maanta meelo badan oo ka mid ah bogsashada, waa cillad aan caadi ahayn (ED). Taasi waa, ma gaari karaan gus adag ama kacsan. Eeg bandhigidan ku saabsan ED si loo fahmo sababta. Dadka kale, biya baxa daahsan ama jawaab celinta caajisnimada lamaanayaasha dhabta ah waa wax caadi ah. FIIRO GAAR AH maahan inay la kulmaan ED markay isticmaalayaan lebbiska, kaliya marka ay isku dayaan inay xiriir la yeeshaan lammaane dhab ah. Taasi waxay ka dhigan tahay in rag badan oo aan la-hawlgalayaashu xitaa ogaan karin inay sameeyeen dhibaato kacsi.
Cilmi-baariste Valerie Voon oo ah jaamacadda Cambridge ayaa yiri:
"[Kuwa balwadda leh] marka la barbardhigo mutadawiciinta caafimaadka qaba waxay si aad ah ugu dhib badnaayeen kacsiga galmada waxayna la kulmeen dhibaatooyin kacsi badan oo xagga xiriirka galmada ah laakiin ma ahan waxyaabo si cad u galmoodka ah."
Tani waxay sababi kartaa dhibaatooyin daran marka lamaanaha isqabaan. Labada lammaane midkood ayaa laga yaabaa inuu dareemo inuusan ku filneyn inuu awoodo inuu sameeyo galmo ama u muuqdo inuusan awoodin inuu kufsado rabitaanka galmada ee qofka kale. Waxay ku keentay rag badan ceeb iyo weji gabax iyo murugo ama dareen guuldarro oo ka soo gaadha lamaanayaashooda.
Fiiri tan ugu fiican article oo ka soo baxa The Guardian oo la yiraahdo "Miyuu Porn-ka Sameynayaa Ragga Dhallinyarrada ah?"
Tusaale ahaan, hal nin oo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda bulshada dhaqan ahaana isu haystay gabadh bikro ah ilaa guurkiisu u isticmaalay sino ahaan bedelkiisa. Markay isaga iyo afadiisii ​​isku dayeen inay guurkooda joojiyaan, wuu kari waayey inuu galmo sameeyo. Tani waxay sii ahaatay kiiska muddo labo sano ah maadaama uusan ku xirin isticmaalkiisii ​​ficil iyo awood la'aanta galmood. Markan xaaskiisa waxay sheegtay inay rabto furiin. Waxay ahayd markaa fursad in ninka yari helay Gary Wilson's Hadalka TEDx, miyuu ogaaday in isticmaalka suufka daba dheeraaday uu u horseedi karo qalal kacsanaan. Waxaan rajeyneynaa in xaaskiisa ay joojisay dacwada furiinka maxaa yeelay tani waa xaalad daawo ah. Immisa guur iyo cilaaqaad dheeri ah ayaa saameeya filimada qaawan ee internetka?
Warka fiicani waa in markay raggu ka daayaan lebbiska internetka in muddo ah, shaqadooda kacsan dib loo soo celin karo. Waxay qaadan kartaa bilo ama xitaa sanado kiisaska qaarkod ee madax adag. Si la yaab leh waxay ku qaadataa ragga dhalinyarada ah waqti aad u badan si ay uga soo kabtaan “mojo” ka ragga waaweyn. Tani waa sababta oo ah ragga da'da weyn waxay ku bilaabeen shaqooyinkooda siigaysiga joornaalada iyo filimada iyo soo-gaadhista galmada ma ahayn mid inta badan kacsan oo joogtayn ku filan si loo abuuro qaboojinta galmada iyo waddooyinka daawashada internetka muuqaalka porn video-ka. Ragga dhalinyarada ah waxay u isticmaalaan porno iyo xaasidnimadooda muddo dheer mudadii halkii ay isticmaali lahaayeen fikradahooda, qaabkii hore u ahaa.
Waa kuwan qaar ka mid ah natiijooyinka cilmi baarista:
• Talyaaniga 2013: da'da 17-40, bukaanno badan oo da'yar ah waxay qabeen Qalalaasaha Erectile-ka (49%) ka weyn tan ka wayn (40%) Daraasad dhammaystiran ayaa la heli karaa halkan.
• USA 2014: da'da 16-21, 54% dhibaatooyinka galmada; 27% Qalitaanka Erectile; 24% dhibaatooyin la xiriira orgassimka. Soo koobista cilmi baarista ayaa la heli karaa halkan.
• UK 2013: shanaad wiilasha da'doodu tahay 16-20 waxay u sheegtay Jaamacadda Bariga London inay "ku tiirsan yihiin porno sida kicinta jinsiga dhabta ah" halkan.
• a Jaamacadda Cambridge waxbarashada 2014, da'da celceliska 25, laakiin 11 oo ka baxsan 19 ayaa sheegay in isticmaalka sigaarku uu sababay ED / hoos udhigay libido la wadaagayaasha, laakiin ma la jimicsado.
Porn wuxuu saameyn ku yeelan karaa firfircoonida awooda jidheed ee xiriirka galmada
Dhowr sano ka dib hagaajinta xiriirka awooda ee ragga iyo dumarka, waxaa jira cadeymo badan oo dhow oo muujinaya in ragga qaar ay noqdeen kuwa sii xoog badan oo dagaal badan, gaar ahaan xiriirka galmada. Habdhaqan aan loo baahnayn ayaa u muuqda inuu ku kiciyo xoogaa xoog ah isticmaalka ragga ee qaawan internetka.
A 2010 waxbarasho ka mid ah waxyaabaha ku jira DVD-yada ugu badan ee lagu iibiyo ayaa lagu ogaaday in 304 sahaminta falanqaynta, 88.2% waxaa ku jira gardarrada jismi ahaan, kufilan ahaan, isdifaac, xiirto, iyo xoqdo, halka 48.7% muuqaalkii ay ku jireen gardaro afka ah, ugu horrayn magac-wacitaan. Dembiileyaasha gardarada ah ayaa badanaaba lab ah, halka bartilmaameedyada gardarrada ay ahaayeen dumar badan. Bartilmaameedyada inta badan waxay muujiyeen farxad ama ka jawaabaan si daacadnimo ah gardarrada.
Dhisida cilmi-baaristaani waa daraasad cusub oo jarmal ah oo lagu ogaaday in raggii ka qeyb galay ay ahaayeen kuwa ugu awood badan galmo ahaan Dabeecadaha qasabka ah waxay ahaayeen kuwa sida badan u isticmaala filimada sawirka iyo kuwa si joogto ah u cabba khamriga kahor ama xilliga galmada.
Tani waxbarasho sahamiyay xiisaha ragga iyo dumarka ee jinsiga ah ee Jarmalka iyo ku lug lahaanshaha dhaqamada kala duwan ee lagu arkay falanqaynta dhowaan ee filimada. Xiisaha loo qabo daawashada filimada qaawan ee foosha xun ama isticmaalka badan ee filimada qaawan ayaa lala xiriiriyay ragga rabitaankooda ah inay ku lug yeeshaan ama horeyba ugu lug yeesheen dabeecado sida timo jiidaya, dharbaaxida lammaanaha adag oo ku filan inuu ka tago calaamadda, dheecaanka wajiga, xiritaanka, laba-galitaanka ( yacni gelitaanka dabada ama siilka lammaanaha isla mar ahaantaana nin kale), dameer-ka-afka (yacni si caadi ah u dhex galista lammaanaha ka dibna guska si toos ah afkeeda u galiyo), cilad guska, wajiga oo dhirbaaxo, ceejis, iyo wicitaan (sida " jilicsan "ama" dhillo "). Iyadoo la raacayo cilmi-baaris tijaabo ah oo la soo dhaafay oo ku saabsan saameynta khamriga iyo fara-xumeynta soo-gaadhista ragga ee suurtagalnimada qasabka galmada, ragga ku hawlanaa dabeecadaha ugu badan ayaa ahaa kuwa si joogto ah u cabaya sawir-gacmeedka oo si joogto ah u caba khamriga kahor ama inta lagu jiro galmada.
Dabeecada Galmada iyo Habdhaqanka Galmada ee kale
Waxaa jira cadeymo badan oo loola jeedo in la muujiyo dhaqdhaqaaqyo si aad u muuqata u kicin kara, sida galmada afka, isugeyn labalaab ah ama murqaha wajiga. Hase yeeshee, dadka la soo bandhigay ayaa la bixiyaa ama lagu khasbaa inay sameeyaan waxyaabo aysan caadiyan samayn karin doorashada. Qaar badan oo ka mid ah haweenka xiirta haweenka ah ayaa lagu galmooday galmo ganacsi.
Muuqaalka internetka waxaa guud ahaan lagu sameeyaa jawi aan sharci ahayn. Waxay badanaa muujisaa dhaqdhaqaaqyada khatarta ugu jira caafimaadka. Tusaale ahaan waxaa jira isticmaalka ballaaran ee "xatooyada", taas oo ah jinsiga galmoodka ah, badiyaa galmada, oo aan lahayn cinjir. Isticmaalka kondhomka ayaa ka dhigaya jinsiga la muujiyay inuu u muuqanayo mid dhab ah iyo saameyn muuqata oo muuqata. Iyaga oo ka fogaanaya cinjirrada "porn-makers" waxay muujin karaan isbedelka ugu sareeya ee dheecaannada jidhka, oo muujinaya 'jinsiga ugu da' yar 'iyo inuu kuu muujiyo fursadaha khatarta ah ee noloshaada jinsigaaga.
Xirfadleyaasha caafimaadka iyo caafimaadka galmada ayaa kugula talinaya in dhammaan wada-hawlgalayaasha cusub loo tixgeliyo waxa ay yihiin - Ilaha ugu muhiimsan ee Cudurrada Galmada La isugu Gudbiyo (STIs), oo ay ku jiraan HIV / AIDS. Ku-shaqeynta jinsiga leh lamaanaha dhabta ah waa wax khatar ah oo la sameeyo. Adiga iyo lammaanahaagu waxay ku xiran yihiin heerka khatarta.
<< Saamaynta Maskaxda Cadaadis >>